FAKAFAKA: mianara rehefa tsy mahay ! | NewsMada
FAKAFAKA: mianara rehefa tsy mahay !
Aza menatra raha mbola ao ilay finiavana ny hianatra. Tapitra ny volana jona nankalazana ny « Iray volan’ny teny malagasy ». Tao ireo niezaka mafy ny nanaja ny tenin-drazana fa tsy vitsy ihany koa ireo zatra ny lalan-dririnina ka nanohy ilay fomba ratsy fanaony hatramin’izay ihany. Manafangaro tsy amina ahiahy ny fiteny malagasy sy ny fiteny vahiny. Miteny sy miresaka amin’ny fiteny vahiny kanefa Malagasy toa azy no iresahany, sns. Iny ny « Volan’ny teny malagasy » hivalona anio iny ihany koa anefa no nahatsapana fa misy ny Malagasy tsy mahay miteny malagasy. Tahaka izany ihany koa ny fahaizana manoratra. Malagasy tsy mahay manoratra teny malagasy !
Tranga azo arenina tsara raha vonona ny hianatra sy hifanitsy ny tsirairay. Tsy mandeha ho azy ny fahaiza-manoratra fa tsy maintsy hianarana. Tahaka izany koa ny fahaizana miteny. Tsy misy azo tsinontsinoavina ireo raha te hiteny sy hifehy ny teny malagasy. Nikely aina fatratra ireo mpanjakazaka an-tanin’olona nianatra ny teny malagasy satria nisy « raha » nokendreny tao. Ka maninona raha mba halain-tahaka ny lafin-tsaran’io fihetsika io ?
… Tsy azo hadinoina mantsy fa anisan’ireo singa lehibe indrindra mandrafitra sy mamolavola ny fomba fisainan’ny olona ny teny itenenany. Antony goavana tsy mety mampitohoka mihitsy ny olana sy ny vaha olana misy eto Madagasikara io tranga io, hany ka zary resaky ny moana sy ny marenina no iafarany. Ingahy injeniera mitondra vahaolana ho an’ny tantsaha, ny androatokon’ny lazainy, teny frantsay avokoa. Inona no azo handrandraina amin’izany ? Nitondra olana vaovao ho an’ny tantsaha aza, angamba, ilay teknisianina fa tsy nandroso vahaolana !
… Mila mianatra, hono, ny tantsaha malagasy ! Aiza anefa izay sekoly ianarany eo ? Iza no hampianatra azy ireo ? Miala 15 km eto an-dRenivohitra aza, sady tsy ampy sekoly no tsy manana mpampianatra vao mainka ka lavitra kokoa noho izany. Fa maninona raha ny rafi-mpampianarana eto Madagasikara mihitsy no ovaina hamoaka teknisianina mahay manazava zavatra amin’ny fiteny malagasy ? Azo atao tsara izany sady vahaolana voajanahary rahateo… Sa ve mila volabe sy fanampiana avy any ivelany vao vita izany ?